Iji Digital Asset Management mee ka Nkwalite mmekọrịta mmekọrịta dị na Streamline | Martech Zone
Anyị nwere ndị ahịa abụọ ugbu a nwere ọtụtụ nde ndị ahịa na mba. Nrụgide iji bulie usoro mgbasa ozi mmekọrịta nke na-akwalite, na-emeghachi omume ma na-azaghachi nha nke netwọkụ abụghị obere ọrụ - ma ọ gaghị ekwe omume n'ezie na-ejighị arụmọrụ na akpaaka.
Ulo oru di iche iche amaghi bu na ndi ichoro ha na oru ha iji mee ka ikike ichota, kwado ma biputa ihe ndi emeputara. Ihe eji eme ihe nke onye ọrụ (UGC) dị egwu n'ihi na ọ bụ ọdịnaya n'efu na-akwado ụlọ ọrụ site na ndị ọzọ. Kwesighi ịga chọta ya - ọ dịlarị na mgbasa ozi mmekọrịta!
Doo mmekọrịta, n'aha MINI USA, na - ejikọ netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta (dịka Facebook, Twitter na Instagram), ngwaọrụ ndị na - arụ ọrụ na igwe ojii (dịka IFTT.com), ngwaọrụ nnyefe faịlụ (dị ka Dropbox) na usoro njikwa akụ dijitalụ na nchịkọta ọdịnaya na ya Widen-kwadoro dijitalụ Asset library.
Idgbasapụ Iji Ihe Nlekọta # 1
Ndị ahịa MINI na-eke ma kesara ihe oyiyi na MINI ha. Ihe onyonyo ndị a dị n'ofe netwọkụ mmekọrịta ọtụtụ ma chọọ ka etinyere ha ma hazie ka ha jiri ha. BEAM na-eji IFTT.com na Widen mwekota na Dropbox iji dozie ndị ahịa mepụtara ọdịnaya site na ịlele hashtags mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche.
BEAM etinyere Widen DAM ma mepụta usoro ọrụ, na-eji Mwakpo nke Dropbox mwekota, iji nweta ọdịnaya site na Instagram, Facebook na Twitter ma weghachite ọdịnaya MINI n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ mkpọsa.
Idgbasapụ Iji Ihe Nlekọta # 2
MINI chọrọ ebe maka ndị nwe MINI iji nyefee ọdịnaya vidiyo maka asọmpi. E kwesiri ka ndị MINI nyochaa vidiyo ndị a tupu e gosipụta ha na weebụsaịtị. Ndi mmadu ghachikota ihe ndi mmadu n’eme ka agha ha MINIUSA.com na ekemende na-eweta dị iche iche ọdịnaya na ya n'ihu ọha gallery.
Doo eji nke API Widen iji kwe ka na-ebugote nke video ọdịnaya, ka ya Widen DAM ngwọta, kpọmkwem site MINIUSA.com. A na-edozi ọdịnaya vidiyo kpọmkwem na Widen DAM ebe a na-enyocha ya wee jiri koodu ntinye nke Widen na-eji ihe ngosi ọha na eze nke MINIUSA.com.
ngosi: Anyị na Widen rụkọrọ ọrụ na atụmatụ ntanetị na ozi ịntanetị email n'oge gara aga. Ha bụ ezigbo ndị nwere nnukwu ngwaahịa maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ijikwa akụ dijitalụ. E wezụga okwu ndị a, jide n'aka na ị ga-ahụ ihe ọmụma ha, Ileba Azụmaahịa maka Njikwa Akụ Ahịa iji ghọta ihe.
Tags: APIokporo osisiihe nkwukọrịtadamdam apinjikwa ihe onwunwe dijitalụDropboxiftttinstagramVidio AhịaObereminiusauGConye ọrụ mepụtara ọdịnayagbasaamẹe api
̀ Na-ege Ntị?